Abenzi be China Mill Mill kunye nabathengisi | Ukudibana
Iindawo Impompo oxwesileyo
Nkqo Pump iindawo
Mechanical Tywina kunye namalungu
Indawo yokusila yebhola inenxalenye yokondla, eyokutyisa, eyokujikeleza, yenxalenye yokuhambisa (isinciphisi, isixhobo esincinci sokuhambisa, imoto, ulawulo lombane) njalo njalo. I-shaft engenanto yenziwe ngentsimbi ephosiweyo, i-lining inokutshintshwa, kwaye izixhobo ezijikelezayo zenziwe ngamazinyo aqengqelekayo. Umgqomo unebhodi yokugaya enxibayo, enokumelana kakuhle nokunxiba. Umatshini uzinzile kwaye uthembeke.Ibhola yokusingqongileyo ibandakanya isilinda, umzimba wesilinda onolungelelwaniso olwenziwe ngezinto ezinxibayo, kwaye ugcine isilinda sayo esijikelezayo, sithwele inxenye, njengemoto, kunye nezixhobo zokuqhuba, ipulley, unxantathu, njl.
Malunga nezinto ezibizwa ngokuba ngamalungu ebhleyidi, ngokubanzi ayizizo zinto ziphambili, izinto ezikwindawo yokuphela kokutya kunye ne-screw yangaphakathi ezijikelezayo, kunokuthiwa kwindawo yokuphuma ekhupha umlomo ngesikrufu sangaphakathi sinokubabiza ngokuba yincakuba yentsimbi.
Ukongeza, kwizixhobo ezincedisayo zokuphela kokuphela, ukuba kusetyenziswa isixhobo sokuhambisa, kuya kubakho iindawo ekuthiwa ziincakuba zomoya kwizixhobo, kodwa ngokungqongqo, ayiyonxalenye yokusila kwebhola. Ibhola lokusila eyomileyo kunye ne-wet grate yebhola yokusila inokukhethwa ngokuhambelana nezinto kunye nemowudi yokuhambisa amanzi. Amandla okusindisa ibhola lokusila, ulungelelwaniso oluzenzekelayo lomqolo we-centripetal roller spherical bearing, ukumelana okusebenzayo kuncinci, ukusebenza kwamandla okusindisa kuyamangalisa. Inxalenye yomzimba womgqomo womgqomo woqobo uye wongezwa ngesilinda sekhowuni, esonyusa umthamo osebenzayo wokugaya kwaye senze ukuhanjiswa kwetyhubhu kumbhobho kufanelekile. Le mveliso isetyenziswa ngokubanzi kwisinyithi esingena-ferrous, isinyithi esine-ferrous, intsimi yokuxhamla kwisinyithi, ishishini lamachiza kunye nomzi mveliso wezinto zokwakha.
Ball ufakelo lokusila:
A) isicwangciso sokufaka siyilelwe ngokobunjineli besiseko somsebenzisi kwaye kufuneka sifakwe kwicala, indawo kunye nendawo yedayagramu;
B) inqwelomoya esezantsi yefuselage kufuneka yomelele, kwaye ukubhabha kwendiza engezantsi kwesilinda akukho mkhulu kune-1.5 / 1000 emva kohlengahlengiso oluthe tyaba.
A) susa umbandela kwisiseko sezixhobo zofakelo, ngakumbi udonga lwangaphakathi lomngxunya akufuneki lube nothuli, ioyile, amanzi kunye nolunye ulwelo;
B) emva kokukhupha amatyala okupakisha, injini ephambili iya kusiwa kwindawo yokufaka kunye nezixhobo ezifanelekileyo zokuphakamisa (crane / forklift);
C) beka izixhobo kwindawo efanelekileyo, imingxunya ye-anchor bolt mounting, kwaye "iinyawo eziphilileyo" zebhanti engahleliwe ziya kudityaniswa kwisisu sesakhelo emva kokudityaniswa kwisisu sesakhelo, emva koko ukwenziwa kwesibini kungenziwa;
D) emva kofakelo lweeyure ezingama-24 zamandla esamente, inokusetyenziselwa ukuqinisa umatshini wokuvavanya ukulayishwa kwe-nut;
E) ukufikelela kumandla;
F) ukuhlolwa kokufakwa kunye nokulungiswa kokungahambi kakuhle;
G) iikhabhathi zombane zibekwe kwigumbi elinenjini ngaphandle kwesidingo sokufaka umgangatho.
Ufakelo lokusila ibhola lugqityiwe, uhlolo, lunokuba novavanyo olungenanto, ukugunyazisa ibhola lokusila ngabaqhubi abanobuchule bebhola kufuneka babe noxanduva, ibhola lokusila kunye nokuthobela ngokungqongqo iinkqubo zokusebenza zokhuseleko.
(1) ixesha lokusebenza kokungasebenzi aliyi kuba ngaphantsi kweeyure ezili-12 ukuya kwezi-24, kwaye iingxaki zokusebenza ziya kusonjululwa ngexesha.
(2) ukuqhuba ngokungasebenzi kokugunyazisa ukuvavanywa komthwalo oqhelekileyo, kunokuqhutywa xa uvavanyo lomthwalo luqhutywa kuzo zonke izigaba, umsebenzi wokulayisha kufuneka wenziwe ngokwemeko yokukhutshwa kwisondlo, kuthintele ibhola yokugaya ngokungeyomfuneko kunye nesilinda sempahla kunye nomonakalo.
A) dibanisa izinto ezifanelekileyo kunye ne-1/3 yeebhola zentsimbi (ubuninzi bobunzima besingqusho sebhola) ukuzama iiyure ezili-12 ukuya kwezi-24.
B) yongeza ukuya kwi-2/3 yemali yeebhola zentsimbi ezibalekayo iiyure ezingama-24 ukuya kuma-48.
C) ngokweemeko zokukhutshwa kwebhola yebhola, ukuveliswa kweemveliso ezifanelekileyo, ngokubhekisele kuhlobo olufanayo lomatshini wokugaya ibhola, ukumisela inani lokulayishwa kwebhola kumatshini wokugaya ibhola, kungabikho ngaphantsi kweeyure ezingama-72 kuvavanyo lokubaleka.
(3) ukwanda komthwalo ongentla kunye nobude bexesha lokuvavanywa kugqitywe ngokusekwe kwimeko yokusebenza kwegiya yesixhobo kunye nesixhobo sokunciphisa (ukunyuka kobushushu, ingxolo, ukudibana komhlaba ngamazinyo, njl.). Ngaphambi kokuchaneka kokunxibelelana komphezulu wezinyo akuhlangabezani neemfuno zoyilo, ngekhe usebenze ngomthamo opheleleyo.
(4) inkqubo yokupholisa nokuthambisa kufuneka isebenze ngokwesiqhelo ekusebenzeni kovavanyo, kwaye iqondo lobushushu lokuthwala okuphambili, ukuhambisa ukuhambisa kunye nokunciphisa kufanele kube yinto eqhelekileyo.
(5) emva kokulayisha i-2/3 kuvavanyo lwebhola yentsimbi iiyure ezingama-24 ukuya kuma-48, jonga kwaye uqinise zonke iibholiti kwakhona.
(6) inkqubo yolingo kufuneka ibhalwe phantsi ngononophelo.
Ukuxuba, ukugaya, ukusila ibhola kusetyenziswa ikakhulu izinto ze-ceramic sisixhobo esifunekayo kwimveliso yeentlobo ezahlukeneyo zeemveliso zeceramic, umatshini USETYENZISA uxinzelelo lokudibanisa, ukunciphisa ukuqala kwangoku, ulwakhiwo lwahlulwe lwayanyaniswa kwaye lwahlukaniswa. Nge-v-belt drive, inqanaba elinye okanye ukuphinda kabini ukudibanisa, ixhotyiswe ngenjini yamandla encinci ezimeleyo.
Okulandelayo: Shaft umkhono
Idilesi: Kumgangatho wama-22, iXingji kwiXesha elizayo B, No. 155 Changjiang Road, Shijiazhuang, kwiPhondo le-Hebei, China
Whatsapp: + 8818033831033